AppLock ဟာ android များအတွက် Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » AppLock - လက်ဗွေ, PIN နံပါတ် & Pattern ကို Lock ကို
AppLock - လက်ဗွေ, PIN နံပါတ် & Pattern ကို Lock ကို APK ကို
Applock - လက်ဗွေ, Pin & Pattern ကို Lock ကို, App ကိုသော့ခတ်နှင့်သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်သမျှ app များအတွက်အကောင်းဆုံး app ကိုသော့ခလောက်တချိုး-in ကိုတပ်လှန့် (ကျူးကျော် selfie), Applocker Hide နှင့်အသှငျပွောငျးသော့ခတ် (AppCover) ။ အားလုံး apps တွေအတွက် Applock မြင့်မားတဲ့လုံခြုံရေးအားလုံးကို app တစ်ခုတည်းမှာ features နှင့် / All-န်းကျင်လက်ရှိအချိန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပေးသည်ပေါင်းစပ်။ ဒါဟာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တားဆီး နှင့် , privacy ကိုကိုယ်ရံတော်ကိုထောက်ပံ့ပေးသင့်ရဲ့ဖုန်းအပိုလုံခြုံစောင့်ရှောက်!Easy-To-အသုံးပြုမှုနဲ့ Quick Response! သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များအတွက်သီးသန့်လုံခြုံရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့!
💎 App ကိုသော့ခတ် - Applocker, လက်ဗွေသော့ခတ်, စကားဝှက်သော့ခတ်, ထောက်ခံပုံစံသော့ခတ်။
💡 ဘေးကင်းလုံခြုံပြခန်း - Applock သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်ပြခန်းသော့ခတ်။
💡 Break-အတွက်သတိပေးချက်များ - သင့် app ကိုမျက်နှာပြင်သော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားသူကိုကျူးကျော်သူတွေကကာကွယ်ပါ။
💡 အသှငျပွောငျး Lock ကို - မှားယွင်းမှုတစ်ခုအစီရင်ခံစာသို့အတုကားသော့ဖွင်မျက်နှာပြင်။
💡 AppLock အိုင်ကွန် Hide - ထိုဂဏန်းတွက်စက်ထဲသို့ app ကိုသော့ခတ်အိုင်ကွန်ပြောင်းပါ။ အခြားမည်သူမျှ AppLock ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
💡 Cleaner & Phone ကို Boost - သန့်ရှင်း Junk ဖိုင်များကို, APK ကိုဖိုင်များ, နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်။
💡 ဘက်ထရီ Saver - Android အတွက်ဘက်ထရီပါဝါကို Save လုပ်ထားပါ။
🔒 App ကိုသော့ခတ် - အခြားသူများကသင်၏လျှို့ဝှက်ချက်စစ်ဆေးစိုးရိမ်ဘယ်တော့မှမ!
Applock ထောက်ခံမှု app ကို Locker, စကားဝှက်သော့ခတ်, ပုံစံသော့ခတ်နှင့် fingerprint သော့ခတ်။ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူကျွမ်းကျင်စွာသော့ခတ်အတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးအပ်။ သင့်ဖုန်းနှင့် app ကိုပိုလုံခြုံစောင့်ရှောက်ရန်သင့်ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုစောင့်ရှောက်လော့။ သငျသညျဂိမ်းကစားနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဖွင့် messing စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
🔐 app များကိုသော့ခတ် - app ကို Locker နှင့်သင်၏အများဆုံး / private ထိခိုက်မခံတဲ့ apps တွေကိုသော့ခတ်!
app ကိုသော့ခတ်အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ, App ကိုသော့ခတ်ထိုကဲ့သို့သောလုံခြုံပြခန်းသော့ခတ်အဖြစ်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာရှိသမျှ apps များ, WhatsApp ကို Facebook ကသော့ခတ်နိုင်, Instagram ကိုစသည်တို့ကိုအကွိမျမြားစှာ Lock ကို Styles နှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရသော App ကိုသော့ခတ်ပေးသငျတို့လျှို့ဝှက်စွာသင့်ရဲ့မရှိဘဲသင်၏ app ကိုသော့ဖွင့်ဖို့လိုလားတဲ့သူကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ရန်ကူညီပေးသည် ခွင့်ပြုချက်။
???? ကျူးကျော်ထဲက Find - သင့်ပုဂ္ဂလိက apps များအပေါ် Snoop ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူကိုရှာဖွေလိုပါသလား?
ကင်မရာကိုခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ Applock လျှို့ဝှက်စွာမှားစကားဝှက်နဲ့ app များကိုသော့ဖွင့်တစ်စုံတစ်ဦး၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုယူပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံစပ်စုတဦးတည်းဖမ်းရန်သာသင်ပြလိမ့်မည်!
🔢 AppLock အိုင်ကွန် Hide - သင့် app ကို Locker app ကိုဖော်ထုတ်စိုးရိမ်ဘယ်တော့မှမ!
App ကို Lock ကို Calculator ကိုအိုင်ကွန်သို့ AppLock အိုင်ကွန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းထောက်ခံပါတယ်။ သင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသင်၏ applock app နဲ့ဖယ်ထုတ်ရှာဖွေတာကနေသူစိမ်းတားဆီးကြောင်း applock Hide ။
🎭 အသှငျပွောငျး Lock ကို - app ကိုသော့ခတ်နေသည်ဟူသောအချက်ကိုဖော်ထုတ်စိုးရိမ်ဘယ်တော့မှမ!
အသှငျပွောငျးသော့ခတ်နှင့်အတူ, သငျသညျအတင်းအကျပ်ထံမှကျူးကျော်သူတွေကတားဆီးဖို့အတုမျက်နှာပြင်ကို set up, သို့မဟုတ်သင့် apps များသို့ရဖို့ကြိုးစားနေထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ အဆိုပါကျူးကျော်သာထိုကဲ့သို့သောအစားအမှန်တကယ် app ရဲ့ "တစ်ခုခုမှားသွားတယ်" အဖြစ်တစ်ဦးအတုသတင်းစကားသို့မဟုတ်အတုအမှားဝင်းဒိုးကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ သင်သာမှန်ကန်စွာ app ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏။
✨ Cleaner & Phone ကို Boost - နှေးနှေးပြေး? ဒီဖုန်း Manager ကိုစမ်းကြည့်ပါ!
Applock လည်းရှိတဲ့ Junk, ကျန်နေတဲ့နှင့် APK ဖိုင်ဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သင့်သိုလှောင်မှုအာကာသအခမဲ့တက်ကူညီပေးသည်။ ဖတ်ပြီးသားနှင့်အတူ / ပြင်ပသိုလှောင်မှုခွင့်ပြုချက်ကိုရေး AppLock သင့်ရဲ့ SD ကဒ်တွင်သိမ်းထားသော Junk ဖိုင်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနှင့်ဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Easy-To-အသုံးပြုမှုကိုသန့်စင်အနည်းငယ်ကလစ်၌သင်တို့၏ android ပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးသည်။
🔋ဘက်ထရီချွေတာ - ထိရောက်စွာ Over-စားသုံးမှုဘက်ထရီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်!
Applock ရုံတစျခုကိုထိပုတ်ပါ၌သင်တို့၏ဘက်ထရီပါဝါကိုကယ်တင်တော်မူ၏။ ဘက်ထရီပါဝါစားသုံးမှုပြဿနာများ Target နှင့် fix ။ Applock သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဘက်ထရီသက်တမ်းကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဘက်ထရီကျန်းမာရေးပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးသည်။
🎊 ပိုကောင်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ - ပိုမိုအဆင်ပြေဝန်ဆောင်မှုပေး!
Applock, တည်နေရာနှင့်အတူပိုမိုတိကျ, ဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်ကြမ်းတည်နေရာနဲ့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်ရည်မှန်းချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောအကောင့်ခွင့်ပြုချက်, get ။
🌟 Applock တစ်စမတ် app ကို Locker, privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး°သင် 360 ပေး! 🌟
AppLock - လက်ဗွေ, PIN နံပါတ် & Pattern ကို Lock ကို
6.51 ကို MB